ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ ဘိုးအောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံး - Xinhua News Agency
ဘိုးအောက်၊ ဟိုင်းနန်၊ ဧပြီ ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဘိုးအောက်ဖိုရမ် (BFA) ကို တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဟိုင်နန်ကျွန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ရာ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ခိုင်မာရေး တည်ဆောက်ရန် သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ ဧပြီ ၂၁ ရက်၌ ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လေးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးအား ဟိုင်နန်ကျွန်းရှိ ဘိုးအောက်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပညာရှင်များ အပါအဝင် နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၆၀ မှ ညီလာခံတက်ရောက်သူ ၂,၆၀၀ ကျော်ရှိခဲ့သည်။
ယခုနှစ်သည် အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဘိုးအောက်ဖိုရမ်၏ နှစ် ၂၀ ပြည့်မြောက်သည့် အခါသမယလည်း ဖြစ်သည်။ “ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာကြီး – ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ခိုင်မာရန်နှင့် ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လက်တွဲဆောင်ရွက်မည်” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြုလုပ်သော ယခုနှစ်၏ အစည်းအဝေးတွင် အာရှဒေသရှိ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများ၏ နောက်ဆုံး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအား တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများ ဆွေးနွေးရန် အဖွဲ့အစည်းများစွာအတွက် အရေးပါသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးက ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ခိုင်မာရန် လက်ချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များ ရရှိခြင်းနှင့် သဘောတူညီချက် တည်ဆောက်ခြင်းများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း BFA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Li Baodong က ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အစည်းအဝေးက နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝါဒ စောင့်ထိန်းခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး ခိုင်မာအောင်တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်နိုးထရန်နှင့် ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေိနိုင်ခဲ့ကြောင်း Li က ဆိုသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော BFA သည် အာရှဒေသတွင် စီးပွားရေး ပေါင်းစည်းမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရန် ကတိပြုထားသည့် အကျိုးအမြတ်မယူသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
BOAO, Hainan, April 21 (Xinhua) — The Boao Forum for Asia (BFA) annual conference concluded Wednesday in southern China’s island province of Hainan, with consensus built on joining hands to fight the COVID-19 pandemic and strengthening global governance.
The four-day conference in Boao,acoastal town in Hainan, attracted more than 2,600 attendees, including government officials, entrepreneurs and scholars, from over 60 countries and regions.
This year marks the 20th anniversary of the Boao Forum for Asia. With the theme — A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Cooperation, this year’s conference responded to the latest concerns of countries and regions in Asia and provided an important platform for various parties to discuss ways to improve global governance and cooperation.
BFA Secretary General Li Baodong said the meeting helped achieve positive results and build consensus on joining hands to fight the pandemic and strengthen global governance.
The conference also called for upholding multilateralism and strengthening communication and coordination, and explored ways to revive the world economy and promote common development, Li said.
The BFA, founded in 2001, isanon-governmental and non-profit international organization committed to promoting economic integration and sustainable development in Asia. ■
Photo shows the closing press conference of the 2021 Boao Forum for Asia (BFA) annual conference in Boao, south China’s Hainan Province, April 21, 2021. (Xinhua/Guo Cheng)
(နိုင်ငံတကာကပ်ရောဂါသတင်း) ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၁၄ သန်းကျော်အထိရှိလာ